I-Kalispell Studio kwi-Acre eyi-1 ngeeVenkile kunye neGlacier Park
** Nceda uqaphele umninimzi kunye nezinja zabo ezi-2 zihlala kwindawo, kwiyunithi eyahlukileyo ngokupheleleyo, kwaye banokuba khona ngexesha lokuhlala kwakho **
Cwangcisa ukubaleka kwakho kwentaba yaseMontana kwesi situdiyo sinqabileyo saseKalispell. Le propathi ibonelela ngeendwendwe ezi-5 indawo yangaphakathi enefenitshala entle kunye ne-acre yomhlaba omhle obonisa umsesane womlilo, imithi yeziqhamo esele ikhulile, kunye negadi yemifuno. Nokuba usedolophini ukuya kutyibilika kwiNtaba yeWhitefish okanye uhambe ujikeleze iGlacier National Park, esi studio sesona siseko sisekhaya!
Isitudiyo: Ibhedi yokumkanikazi, ibhedi egcweleyo yeFuton
Yamkelwe ngomqolo wezityalo ezivuthiweyo ezihlala ziluhlaza, le ndawo iya kukuzisela ulonwabo ngoko nangoko. Chitha iintsuku zakho uhlola amahlathi elizwe azaliswe zizilwanyana zasendle kunye nobusuku bakho ugcada ii-s'mores kunye nabantu obathandayo kufutshane nomngxuma womlilo wangaphandle.
Ingaphakathi elipholileyo libonisa iipaneli zomthi we-rustic kunye nokuhonjiswa kwesitayela selizwe laseNtshona, ukusuka kwiipowusta zikaJohn Wayne ukuya kwiilassos zentambo kunye neebhutsi ze-cowboy.
Qala usuku lwakho ngokusela ikomityi yakho yekofu kusasa kwesinye sezitulo ezi-2 ezinyakazelayo kwipatio egqunyiweyo ngelixa ujonge kwindawo ezolileyo. Phambi kokuba uphume ngomnyango, yonwabele ukuluma ngokukhawuleza kwibar yesidlo sakusasa yabantu aba-2 ukuze uphembelele uhambo lwakho lwemihla ngemihla!
Ayikho indlela engcono yokufudumala emva kosuku olubandayo lwasebusika kunokuba ukhululeke malunga neziko lombane elikufuphi ne-32-intshi ye-flat-screen TV. Ibhedi ye-futon-over-full bunk yeyona ndawo ifanelekileyo yokubamba i-nap yasemini okanye ukonwabele ukufunda okuthandayo ngelixa ulinde isidlo sangokuhlwa.
Zilungisele isidlo esitshisiweyo sesidlo kwigrisi yegesi kwaye ugqibezele ubusuku ngemuvi ekwisikrini esisicaba seTV. Xa sele ulungele ukulala, phumla kwenye yoomatrasi aba-3 obutofotofo kwaye ukhukuliseke kubusuku obuzolileyo bokulala.
Ngobusuku obungayolisi kwipropathi, yiya eKalispell ujonge indawo yokutya yasekhaya! Qhuba imizuzu eli-9 ukuya kwi-Desoto Grill, indawo eshushu yasekuhlaleni ye-BBQ ephekwe kancinane, ibhiya ebandayo, kunye nokwamkela iindwendwe ezininzi ezifudumeleyo kumnini-ndawonye u-Shawna.
Ukuba ujonge i-adventure, qhuba imizuzu engama-45 ukuya kwiZiko leeNdwendwe le-Apgar kwi-Glacier National Park. Iziko labatyeleli yeyona ndawo ifanelekileyo yokuqalisa kuyo nayiphi na i-adventure yePaki yeSizwe kwaye ibonelela ngeemephu ezahlukeneyo zeepaki, ulwazi lwesikhululo somgadi, kunye nolwazi lwepaki ngokubanzi!
Kubo nabaphi na abathanda ukutyibiliza emkhenkceni, qiniseka ukuba uqhuba ngaphezulu nje kweekhilomitha ezingama-20 ukuze ufike kwiNdawo yokuchithelwa yeholide yeWhitefish. Le ntaba ibonelela ngeendlela ezingaphezu kwe-100 eziphawulweyo, isixa esikhulu sesitya kunye ne-skiing yemithi, kunye neepaki ze-4 zomhlaba. Induli ikwavulekele ukuhamba ngebhayisekile yeentaba, i-ziplining, kunye nokuhamba ngeenyawo kuzo zonke iinyanga zasehlotyeni.
Abahlali bayithatha ngokuzimisela igalufa yabo kwaye ukuba ujonge ukufumana umdlalo ungajongi ngaphaya kweKhosi yeGalufa yeGreens. Ikhosi ingaphantsi kwemizuzu emi-5 yokuqhuba ukusuka kwigumbi lokuhlala kwaye ibonelela ngezona zityalo ziluhlaza kwiFlathead Valley!
Izimvo eziyi-10 413
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kalispell